Odeyaal Al-Shabaab Amar Siisay Oo Xukuumadda Soomaaliya Xabsiga U Taxaabtay iyo Dareenka Dadweynaha | Himilo Media Group
Odeyaal Al-Shabaab Amar Siisay Oo Xukuumadda Soomaaliya Xabsiga U Taxaabtay iyo Dareenka Dadweynaha
Beled-weyne, 27 August, 2019 (Himilo)-Odeyaal dhaqameed tiradoodu tahay Toddobo xubnood ayaa lagu xidhay magaalada Beledweyne ee xarunta u ah gobolka Hiiraan ka dib markii saraakiisha maxkamadda ciidammadu ay amar ku bixiyeen in la soo qabto dhammaan odeyaashii cafis weydiisashada ugu tegay urrurka Al-Shabaab.
Oday dhaqameedyada xabsiga loo taxaabay ayaa qeyb ka ahaa ergadii soo xulay xildhibaannada baarlamaanka federaalka Soomalaiya ee kasoo jeeda Hir-shabeelle.
Dhawaan waxa soo baxay warar sheegayay in odayaashii ergada ahaa ay isu dhiibeen al-shabaab, iyagoo ka dalbaday in la cafiyo, una hoggaansamay amar lagu siiyay inay toobad keenaan.
Dowladda Federaalka oo arrintaas ka cadhootay ayaa hadda billowday tallaabo ka dhan ah raggaas.
Maxamed Cabdiqaadir oo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidammada ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inaan la aqbali karin in odayaashii la soo macaamilay Al-Shabaab ay si xor ah isaga dhex mushaaxaan magaalada, waxaanu yidhi “Waxaan soo saarnay amarro aan ku socodiineyno dhammaan laamaha amniga, oo ah inay soo xareeyaan, oo la baadho, maxkamaddana la hor keeno. Waxaan dalbannay in lasoo xidho nin walba oo ka mid ah ergadaas, oo Shabaab u tagay, lana soo macaamilay. Amarkaas wuxuu khuseeyay taliska nabad sugidda ee Nisa, kan qeybta saldhigga Baladweyne iyo millatarigaba, Waxyaabaha cajiibka ah waxa ka mid ah inaan heyno codadkii ay Shabaab kula soo ballamayeen, iyagoo odhanaya wixii aad nagula ballanteen waan fulineynaa, kolley waajibaadka shaqo ee ay isku direen iyagaa garanaya”. Ayuu yidhi Maxamed.
Sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ay jiraan odayaal kale oo hadda ku maqan Al-Shabaab, “Amarka shalay ayuu soo baxay, odayaal dhowr ah waa lasoo qabtay, kuwo baadiyaha ayaa laga doonay, qaar kalena hadda ayey Al-Shabaab ku maqan yihiin, iyagana waan sugeynaa, marka ay soo laabtaan ayaana sharciga la marsiinayaa”.
Dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa sharci darro ku sheegay xadhiga odayaasha iyagoo ku difaacay ragga xidhan in markoodii hore dawladdu dayacday amnigooda sidaa daraadeedna ay amni u doonteen halka ay ka heli karaan.
Nabadoon Dacar Xirsi Nuur oo ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan ayaa tallaabo aan sax ahayn ku sheegay xadhiga odayaasha, “Xadhiga odayaashaas loo geystay waxay ila tahay in dhibaato laga helo mooyee inaan wax faa’iido ah laga heleyn, sababtoo ah ninku waa in ama amnigiisa loo sugo ama uu isagu maslaxadiisa raadiyo. 21 qof ayaa lagu dilay gobolka Hiiraan ilaa maalintii la billaabay howlaha dowladnimada Soomaaliya, haddana ergadii waxa laga dilay 7 qof, waxaas ayey arkeen, waayo maamulkii meesha ka arriminayay wax qorshe ah uma uu sameynin sugidda ammaanka odayaasha. Waxay ka quusteen inay dowladda dhankeeda amni ka helaan, sidaas darteed ayeyna badbaado u raadsadeen”, waxaanu uu intaas ku daray in dowladda looga baahan yahay inay la dagaallanto Al-Shabaab, si ammaan buuxa loo helo, “Ha qaadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, odayaashu kama hor taagna, Al-Shabaab haka kiciyaan deegaanka. Nimankaan amniga raadsaday waa niman ay cabsi ku jirtay oo is lahaa ma caawa ayaa laguu imaan doonaa mise barri”.